Henry Oo Yeeshay Twitter, 60 kun Oo Qofna Ku Darsadeen ilbidhiqsi Gudihii
HomeWararka MaantaHenry Oo Yeeshay Twitter, 60 kun Oo Qofna Ku Darsadeen ilbidhiqsi Gudihii
Weeraryahankii hore ee naadiga Arsenal, Thierry Henry ayaa ku baahiyey fariintiisii ugu horeysay kadib markii uu gallabta si rasmi ah u samaystay Cinwaan ‘Account’ uu ku yeelanayo shabakada bulshadu ku kulanto ee Twitter.
Ciyaaryahankan Faransiiska ah, oo imika u ciyaara naadiga New York Red Bulls ee horyaalka wadanka Maraykanka ‘MLS’ ayaa taaladiisa ku hor taala garoonka Emirates Stadium ka dhigtay sawirka wajahada u yaala barta uu ka samaysaytay shabakada Twitter.
Laacibka 36 jirka ah, oo in ka yar 30 daqiiqo ay ku soo darsadeen in ka badan 60,000 oo qof ‘followers’ ayaa fariintiisii ugu horeysay ee uu ku baahiyey ahayd mid soo dhawayn ah, isla markaana uu ku ballanqaaday in cidii doonaysa inay la soo xidhiidho hadda wixii ka dmabeeya ay halkan ugu soo qori doonaan oo uu akhriyi doono:
‘Hi’ kani waa Thierry Henry. Halkani waa bartayda rasmiga ah ee Twitter . Wax kasta oo aad halkan ku soo baahisaan waxay noqon doonta mid aan arko oo akhriyo. Ku soo dhawaada.’— Thierry Henry (@ThierryHenry) May 12, 2014′ – Ayay ahayd fariintii uu ku ibo furay Twitter kiisa ciyaaryahan Henry.
Henry ayaa ah ciyaaryahanka hogaanka u haya gool dhalinta kooxda Arsenal guud ahaan xidigihii soo maray, waxaanu qarankiisa France u saftay 123 kulan intii uu ciyaaraha ku soo dhex jiray.
Taageere ku Dhintay Rabshado Ka Dhacay Kulankii Atletico iyo Deportivo
Chicharito Oo U Mahad-celin Uu U Diray Ferguson Iyo United Ka Reeabay van Gaal